Makhaayadaha Cunnada Jumlada | 28 dhoobada
Qulqulka la densanaa laba sideed, lagu cuno adduunka
Fiican Shiinaha Casho
Faahfaahin kasta waa fikrad ka duwan, adduunyo kale oo ka mid ah taargooyinka ay soo saartay farsamooyinka wax soo saarka casriga ah.
Cunnadu waa mid ka mid ah waaya-aragnimada ugu dambeysa ee keena chefs iyo dadka. Waxaan ba'an nahay si aan u aragno in taargooyinka iyo barta maddiibadu ay ka soo jeedaan laba sideed aruurinta midabka ay ka tarjumayaan hamiga diirran ee ruuxa ku habboon.
XULASHADA QORAALKA - 2021 Naqshad Casri ah Heerkulka Casriga ah ee Casriga Casriga ah oo lagu dejiyo Naqshadeynta Naqshadeynta Naqshadeynta Gawaarida Gawaarida Hoteelka
Miisaska gaarka ah ee midabka casaanka iyo cagaarka ah, oo leh dusha sare iyo dhalaalaya, oo leh naqshado kala duwan, ayaa loo isticmaali karaa in si wanaagsan loogu qurxiyo miisaska makhaayadaada cuntada. Oo qanciya fikirka cunnooyinka kala duwan.
COPPER BULE - Morden Style Gradient Gre en Glossy Porcelain Restaurant Cuntoware Casho Jumlo leh Custom
Dhaldhalaalka midabka falcelinta leh waa ururinta nuugista dhalaalaysa. Laga soo bilaabo makhaayaddan cusub ee lagu cunteeyo, qaabab kala duwan iyo cabbirro kala duwan oo aad ku xulan karto.
LOTUS BLUE - 2021 Noocyo Cusub oo Buluug ah oo Bullaacad ah, Miisaska Cunnada ee Cunnada leh
Mid ka mid ah waxyaabaha cashuurta dhoobada dhoobada ah ee buluugga ah ee cusub iyo kuwa gaarka ah, kuma koobna oo keliya midabka samada buluugga ah, laakiin sidoo kale waxay ku dhex milmaysaa badweynta buluugga ah ee buluugga ah. Saameyn muuqaal leh, ka dhig cuntadaada mid macaan oo muuqaal fiican leh.
GREEN JUNGLE - Noocyada Caanka ah ee Caanka ah ee Cagaaran Cunnada Cunnada Cunnada, Fasalka AB Dooxada Fududeeyaha
Taarikada makhaayadaha cagaaran ee jumlada ah. Cunnooyinka cabbirka weyn ee weyn ee qaababka kaladuwan, oo loo heli karo makhaayada suuqa Koonfurta-Bariga Aasiya. Waxay yihiin kuwo waara oo ammaan u ah weelka dhaqda iyo microwave.
Haddii aad u baahatid waxkastoo habaynta ah ee aad u tawracaaga fikirkaaga, ha u ogolaato Adeegga Aqoonsiga Xirfadda ee Qaallada ah inuu fikradan rumeeyo.
1. Baadhitaan: Macaamiilku wuxuu bixiyaa sawirka ama sawir sawir ku saabsan fikradda leh qeexitaanka shirkadda ee shirkadda, cabbirka, waxyaabaha iyo qaybinta isbadelka.
2. Naqshadeynta: Kooxda naqshadeynta waxay soo saaraan sawir 3D ah xaqiijintaada ku saabsan qaabeynta, ka dibna ka shaqee saamballada. Kooxda ayaa ku lug leh bilawga mashruuc si loo hubiyo in alaabada ugu wanaagsan ee loo habeeyay ee loogu talagalay in lagu hago baahiyaha macaamiisha.
4. Maareynta Tayada: Si loo iibiyo qaabdhismeedyo tayo sare leh, waxaan u dhowdahay inuu saameyn ku yeesho& Nidaamka maaraynta tayada ee hufan.
Hadafkayagu waa inaan qancino macaamiisheenna tayo sare iyo tayo lagu kalsoonaan karo si loo hubiyo in macaamil kasta uu dareemi karo raaxo iyo kalsooni badan oo ku saabsan badeecadeena miiskooda. Hore u boler laba sideed alaabooyin dhoobada oo si ballaadhan u raadiya codsiyadooda suuqa sababtuna tahay barnaamijyada wanaagsan ee loo sababeeyo qaab wanaagsan.
Aruurinta Miisaanka Cad ayaa buuxiya shuruudaha qayb kasta oo Huteel ah, sida Lobby, Buffet, Makhaayad gaar ah, Cunto Weyn, Bar ...La xiriir wixii faahfaahin dheeraad ah
XALKA KIRADA AROOSKA
Saxan xeedho leh dahab dhalaalaya, lacag ayaa la kulmi kara weydiinta macmiilka kirada ah ee ubaahan bandhigan miiska qurxinta leh ee munaasabada ah. Saxanka xeedho ee galaaska ayaa sidoo kale la kulmaya codsigan gaarka ah.
Uruurinta Qalabka Miisaanka Midabku wuxuu la kulmaa fikradaha kaladuwan ee makhaayada, DIIWAANKA DABKA, URURINTA MAGAALADA, FOGS AYAADOO ...Dhagsii kiiska makhaayadaha si aad u hubiso
SUPER SARKET DINNERWARE SET
Hosen Laba sideed Ceramics ayaa ku soo bandhigay weel xirmo xirmo ah, gaar ahaan 18 kumbiyuutarro halkii gogol ah, 24pcs halkii set. Ku baakadee baakad aamin ah oo hubi inta ugu badan ee alaabada inta lagu guda jiro daabulka ama iibka internetka.
Use u bogol laba dhoobo ah oo sideed dhoof ah sida cinwaankiisu yahay 1998-kii
Iyada oo 30,000 oo mitir mitir oo laba jibbaaran, shirkadda waxaa lagu hayaa xirfado wax soo saar wanaagsan, koox xirfad leh, awood soosaarka sare, maareyn adag. Iyada oo isku darka farshaxanka dhaqameed iyo tikniyoolajiyadda casriga ah, laba gogo 'oo sideed ah oo ay u hoggaansamaan siyaasada abuurista alaabada cusub iyo qaabka farshaxanka; Waxaan bixinaa badeecado heersare ah si aan ula kulmo dalabyada macaamiisha kala duwan.
Kaliya noo sheeg baahidaada, waxaan sameyn karnaa wax ka badan inta aad sawir ka muuqato.
Elio Hotel Linen Linen
La xiriir iibka Jane Lee